मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिभष्मासुर बूढा
शक्ति दुरुपयोगका सम्बन्धमा तराई/मधेसमा एक भनाइ निकै प्रचलित छ– सैयाँ भए कोतवाल अब डर काहेका ! अर्थात् पति नै पुलिसको हाकिम भएपछि डराउनुपर्ने कुरा के छ ?
कन्टिर–बाबू यसमा हल्का संशोधन प्रस्ताव गर्छन्– सैयोनी भए ‘राप’ तो अब डर काहेका । यसको अनुवाद गर्न कन्टिर–बाबू आवश्यक ठान्दैनन् ।
कन्टिर–बाबूका अनुसार अहिले नेपालमा भइरहेको यही हो । उनको ‘राप’को ताप पाएका टिकटके बूढालाई कसैको कुनै डर छैन । न त अवैधानिक न त अलोकतान्त्रिक, बूढालाई नो मतलब । एनी–हाऊ … बयल–गाडा चढेर दुई जना आफूखुसी हिँड्न पाए भयो ।
हैकमवादी बूढालाई खाली आफू शक्तिशाली र अधिनायकवादी बन्ने उपाय चाहिएको छ, त्यसैले विधानको आफूखुसी व्याख्या र प्रयोग गर्छन् । कन्टिर–बाबू उपदेश दिँदै भन्छन्– हेलो टिकटके बूढा, उहिले–उहिले भष्मासुर पनि आफूलाई अमर र अपराजेय ठान्दथे । तर मायावी रूपसीको मोहनी जालमा लठ्ठिएपछि विचराले आफ्नो गल्ती थाहा पाएनन् र त्यसैमा भष्मीभूत भए ।
होस गर बूढा … भष्मासुर बन्ने प्रयास नगर ।
अधिनायकवादी टिकटके बूढा भष्मासुर